२ दिनपछि एकतर्फी खुल्यो दाउन्ने - समाचार - कान्तिपुर समाचार
२ दिनपछि एकतर्फी खुल्यो दाउन्ने
श्रावण २९, २०७४ नवीन पौडेल
नवलपरासी — पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्र्तगत नवलपरासीको दाउन्नेमा एक तर्फीरुपमा सडक खुलेको छ । दाउन्नेको एसमोडनजिकै डाँडाबाट आउने भलको पानीले करिब पचास मिटर बगाएको सडकमा अस्थाई डाईभर्सन बनाएर यातायात सुचारु गरिएको ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक धर्मेन्द्र रावलले जानकारी दिए ।
दुई दिनसम्म अलपत्र परेका यात्रुलाई एकतर्फी भएपनि यातायात सञ्चालन भएपछि राहतको महसुस गरेका छन् । दाउन्ने खण्डको १५ किलोमिटरमा एक दर्जन बढी स्थानमा पहिरो र रुख ढलेको छ ।
सडक बगाएपछि बैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न यात्रुलाई सडक डिभिजन र प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । दाउन्नेकै ज्यामीरेमा आज फेरी सडक भासिएपछि यातायात सञ्चालनमा थप कठीनाई भएको छ । लामो समयसम्म अलपत्र परेका यात्र र सवारीलाई सुचारु गराएको भएपनि पहिरो खसिरहेकाले नियमित यातायात सञ्चालनका लागि भने कठीनाई हुने प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ १४:३४
सधैं गोविन्द केसीको मागका पक्षमा : दाहाल
काठमाडौं — पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू सधैं डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग र मुद्दाको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
२१ दिनदेखि अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न पुगेका प्रतिनिधि मण्डलसँग कुरा गर्दै उनले आफू डा. केसीले उठाएका मागको पक्षमा रहेको बताएका हुन् । ‘काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने र मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सरकारले खरिद गर्नुपर्ने डा. केसीको माग सकारात्मक छ, यसले मेडिकल शिक्षालाई मर्यादित बनाउँछ भन्ने मेरो पनि ठम्याई छ' भेटमा अध्यक्ष दाहालले भने, 'म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँले उठाएका समस्या सम्बोधन गर्न सकारात्मक कुराकानी भएको हो । तर, कतिपय कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण सबै काम सम्पन्न हुन सकेन ।'
अब ऐनमा त्यसबारे ठोस व्यवस्था गरेर डा. केसीलाई आश्वस्त पार्दै अनशन तोडाउनु पर्ने दाहालको भनाइ छ । उनले आइतबार नै यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरेर अनशन तोडाउन पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
भेटमा प्रतिनिधि मण्डलले डा. केसीको स्वास्थ्य अत्यन्त कमजोर हुँदै गएकाले उनले उठाएका माग सम्बोधन गरी अनशन तोडाउने पहलका लागि दाहालसँग आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।